DHUMAATII GAAFA IRREECHAA – Welcome to bilisummaa
Ayyaanni Irreechaa, ayyaana sonaan kabajamaa uummanni Oromoo nagaan yaa’ee, nagaan Waaqa ofii galateeffatu. Nagaan bayee ofii isaatiif, biyya isaatii fi biyyalafaa guutuuf: nagaa, walkabaja, waldandeettii, finnaa fi badhaadhina kadhata. Eekaa, coqorsa asxaa jireenyaa fi asxaa nagaa,daraaraa asxaa jaalalaa qabatee buqqaayee bawuun Waaqa Tokkichasan kan dabreef galateeffatee, kan dhufuuf kadhata. Malkaan Irreechaa malkaa waayyuu (“holy“) waan taheef, Oromoon eeboo fi shootala qabatee achitti hin bawu. Haatahu malee, Wayyaanonni nagaa fi safuu hin beekne, qawwee fi taankiin, helikoptaraa fi gaazii boochisaan Ayyaana Irreechaa-tti yaatee, uummata Oromoo coqorsaa fi daraaraa qabatee yaa’utti dhukaasisuun galaafatte. Wayyaaneen waan kana gooteef: uummata Oromoo mara, uummatoota Toophiyaa mara, uummatoota addunyaa maraa fi Waaqa dallansiisuun of abaarsiftee jirti. Amma nuti Oromoonni jara Waaqaa fi lafaan abaarameen, nama Waaqaa fi lafti jibbeen gonkumaa hin bitamnu! Waaqaa-lafti waan nu cinaa jiraniif, alaa-manaa olkaanee bineeyyii kanneen ofirraa darbachuun of-bilisoomsuu qabna!
Yaa Oromoo koo: “kun mishaa dhaa, qawweewoo hin qabnuu eessaayyi arganna?” naan jettu taha. Amma akka dubbiin nutti hin dheeranneefan, waanan kanaan dura jedhe tokko as irratti isiniif tuqa: “Qawween eessaayyi dhufa?“, naan hin jedhinaa, qawween Oromiyaa keessa ciisaa jiraa! Uummata bilisummaa ofiitii ijaaramee, tokkoomee ka’eef: qottoon, dongoraan, doomaan, cakiin, halbeen, haamtuun, maarashaan, cuubeen, eebboon, shootalli, shimalli, mancaan, gajaraan, manshiin, jaafgaan, hordaan faayyuu qawwee dha. Gabrichi abbaa-gabraa irraa hidhannoo isaa hiikkatee of-bilisoomsuun namaanis, Waaqaanis eebbifamaa dha!”* Eeyyee, Dhumaatii Gaafa Irreechaa kanaan booda, eebba namaa fieebba Waaqaa kanatu waanbadeewwanii fi bulguuwwan warra Wayyaanee irraa: qawwee fi taankii, boombii fi kanneen biroo mara akka irraa hikkannee of bilisoomsinuuf, hamilee fi seexaa nuuf keennuun ol nu kakaasa!
Dhumaatii Gaafa Irreechaa kana booda jiraa Oromoo dhiisatii du’aan Oromootu Wayyaaneen bitamee hin bulu. Barreeffama kiyya isa hardhaa kana waanan kanaan dura barreesse, tokko keessaan isiniif kaasee xumura. “Ammaan booda laftii fi namni, gaarranii fi laggeen Oromiyaa marti diina qawween nu irra taa’ee dhiiga ijoollee teenyaa dhangalaasu kanatti ni ka’u. Laggeen Oromiyaa diinni waraabbatee irraa dhugu dhiiga itti-tahu. Margii fi furri inni irra deemu qoree laaftoo itti-tahuun isa waraanu. Biyyee fi cirrachi inni irra ijjatu barbadaa tahuun isa waxalu. Qilleensi Oromiyaa inni fuunfatu summii isatti taha! Nama Oromoo dhiisitii horii fi bineeyyiin Oromiyaatuu tokko tahuun isa diru! Ammaan booda namaa fi lafa Oromiyaatu, Ayyaanaa fi Waaqa Oromootu ijoollee Oromootiif iyyee iyya dabarsa! Erga Waaqni fi Lafti nuuf iyyee iyya dabarsee, guyyaan bilisummaa fi walabummaa keenyaa dhiyaachaa jira jechaa dha!”**
Tags DHUMAATII irreechaa
Previous #OromoProtests OMN director Ob Jawar regarding #Ireechaa and future Oromiyaa
Next Hidhamaa fi Ajjeefamaatuma Balbala Bilisummaarra Geenyeerra.